Umfundi oshaywe ngesihluku uvule icala lokushaya | Scrolla Izindaba
Umfundi oshaywe ngesihluku uvule icala lokushaya
Umfundi owenza ibanga le-11 esikoleni samabanga aphakeme e-Libode uvulele uthishomkhulu icala lokushaya, ngemuva kokuthi uthishomkhulu emshaye ngesihluku kwaze kwaphoqeleka ukuthi aphuthunyiswe esibhedlela.
U-Emihle Msungubali, ofunda e-Cibeni Senior Secondary School, uthe uthisha wakhe umfice engasigqokile isifonyo sakhe sendwangu ngendlela efanele, nokuthi isifonyo besivale umlomo kuphela hhayi amakhala.
Uthishomkhulu, ongummeli oqinile omelene nokujeziswa ngokushaya njengamanje osekwavalwa, ushaye umfundi sengathi ulwa naye.
Abafundi bakulesi sikole bavame ukushaywa ezandleni hhayi emzimbeni uma befike sekwedlule isikhathi noma uma bengaziphethe kahle.
Kodwa kulokhu kusolwa ukuthi uthishomkhulu ogama lakhe nguS. Njani ushaye lo mfundi ezandleni zombili, emzimbeni kanye nasezingalweni ngesikhathi ezama ukuzivikela ekushayweni.
UThembakazi Msungubali umama womfundi, uthe wabona ukuthi kukhona okungahambi kahle ngesikhathi indodakazi yakhe ifika ivela esikoleni ivuvukele ingalo.
“Ngabona isithupha sakhe sivuvukele. Wangitshela ukuthi uthishomkhulu umshaye ngenduku ngoba ubengasigqokile isifonyo sakhe ngendlela efanele,” kusho UThembakazi.
“Umshayeleni engalweni? Ngabe ubemkhuza noma ubelwa naye?”
UMthethwa Dyasi, onguMqondisi wesifunda eMnyangweni wezeMfundo, uthe basaqoqa imininingwane ngenhloso yokuthi baqondise izigwegwe kulo thishomkhulu.
“Akekho uthisha noma uthishomkhulu onelungelo lokushaya umfundi. Siluleka othisha ukuthi bathole ezinye izindlela zokuyala abafundi ngoba akuvumelekile ukubashaya,” kusho uDyasi.
“Lesi sigameko sisanakwa ngabahloli bomnyango futhi sizofika ehhovisi lami ngokuhamba kwesikhathi.”
Uthe ngeke bakwamukele ukusetshenziswa kodlame uma kuqondiswa izigwegwe kubafundi.
Kanti emasontweni amabili edlule, kwesinye isigameko, uthishomkhulu waseMpumalanga yeKapa waphoqa ingane yesikole ukuba iyongena ethoyilethi lomgodi ukuze ithole umakhalekhukhwini kathishomkhulu.
Lo thishomkhulu waboshwa, wavela enkantolo wabe esededelwa ngebheyili.